အပြာစာပေများအသုံးပြုခြင်း - မည်သူကိုအသုံးပြုသည်၊ စုံတွဲ၏ရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည် (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အဘယ်သူသည်ဒါဟာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မည်သို့ဒါဟာလင်မယားရလဒျ (2012) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့သည်
မှတ်ချက်များ - စုံတွဲများကိုလေ့လာခြင်းသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
J ကိုလိင် Res ။ 2012 မတ်လ 26 ။
Poulsen fo, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ် DM, Galovan AM.
PDF ကို download, Link ကို
အနည်းငယ်သာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး၏အရည်အသွေးနှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဤလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအပင်းများ၊ လူများအသုံးပြုသောအဓိပ္ပာယ်၊ လိင်အရည်အသွေးနှင့်ဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုတို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိသည့်အချက်များကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည်စုံတွဲများ (N = ၆၁၇ စုံတွဲများ) ဖြစ်ပြီးအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည့်အချိန်တွင်လက်ထပ်သည်သို့မဟုတ်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ ဤလေ့လာမှုမှရလဒ်များအရလိင်မှုကိစ္စကွဲပြားမှုသည်အသုံးပြုမှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုအချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအပြုသဘောအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းအထူးသအထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဆိုး, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလည်းအဓိပ်ပာယျညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအကြားဆက်ဆံရေးဟာအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရှင်းပြခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လူတို့တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, (27% မျှအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့) တုန်းပဲအနိမ့်ပေမယ့်, တစ်ပတ်ကိုနှစျဦးမှအဆသုံးပြီးတစ်လလျှင်နှစ်ဦးကိုမှသုံးရက်ပေါင်း 31% သုံးပြီးတစ်လဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းနှုန်းတစ်ချိန်က 16% ကို အသုံးပြု. 16% နှင့်အတူပိုမိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြသ နှင့် 10% တစ်ပတ်ကိုသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရက်ပေါင်းသုံးနိုင်သည်။
တဦးတည်းဗိုလ်လုပွဲ, အဆိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသိသိသာသာအမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Non-အသုံးပြုမှုအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟူသောခဲ့ပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Non-အသုံးပြုမှုအထီးမဟုတ် ဤသည်ယခင်သုတေသန (Kontula, 2009) အကြံပြုထားပါတယ်အဖြစ်မြင့်မားသောအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ကသာဒီနမူနာထဲမှာအလိုဆန္ဒမသုံးကြဘူးတဲ့သူကိုအသုံးပြုဖို့သူအအထီးနှင့်ယောက်ျားပေါင်းအကြားခွဲခြားမှုမှမထင်ခဲ့ပါဘူး, ဆိုလိုသည်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်အများဆုံးလူတို့သညျအခြို့သောအဆင့်မှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောဆိုတဲ့အချက်ကို၏ဖွယ်ရှိသည်။
အဆိုပါ SEM ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်များအထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတစ်တသမတ်တည်း, အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဆိုးအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုနှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီခဲ့သည်။ အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့အကျိုးစီးပွားအင်အားအကောင်းဆုံးအသင်းအဖွဲ့ခဲ့ပေမယ့်, ဒီ Hald နှင့် Malumuth ရဲ့ (2008) တွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်းတဲ့ယောက်ျားဒါလုပ်နေတာအများစုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ယုံကြည်ဖေါ်ပြခြင်းအတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်အကြံပြုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ, သုတေသနကိုအနည်းဆုံးကောလိပ်၏အများစုကြောင်းပြသထားပါတယ်, ယောက်ျားလိင်ဖော်ပြတစ်ခုလက်ခံနိုင်ဖွယ်လမ်း (ကာရိုး et al ။ , 2008) နှင့်လိင် (Boise, 2002) အကြောင်းကိုပညာတတ်ဖြစ်လာ၏တန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းများအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှုမြင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုအတွက်ရလဒ်ကြောင့်အမျိုးသမီး partner ၏သိတယ်နှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတည်ပြု, ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမှနှုတ်ထွက်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဖြစ်နိုင်သည်။ Schneider ရဲ့ (2000) ကညွှန်ပြကဲ့သို့သောအခွအေနသဘောမတူမိတ်ဖက်မကြာခဏအပြုအမူအားဖြင့်ဘက်မှပြန်လည်တွန်းလှန်နေကြခြင်းနှင့်လိင်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဖေါ်ပြခြင်း, လက်တွေ့လေ့လာမှုအဆန်းမဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက် ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအအထီးအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးကြောင်း relational လိင်၌တည်၏။ Schneider (2000) ထက်ပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိရ compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦး-ထက်ဝက် သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်-ဆက်ဆံရေးလိင်အတွက် compulsive အသုံးပြုသူ-ခဲ့ပျောက်အကျိုးစီးပွားကဖော်ပြခဲ့သည်။
It ကိုကအနည်းဆုံးလူတို့သညျအဘို့, အဲဒီညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များ၏သဘောထားအမြင်, လိင်ဆက်ဆံရေးဟာပြောင်းလဲ, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးတွေ-အဖြစ်ညစ်ညမ်းအကြားဆွေးနွေးတင်ပြအစောပိုင်းက-ဆက်ဆံရေးများအတွက်သော်လည်းသူတို့က, ဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူလျော့နည်းကျေနပ်မှုဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့နှစ်ဦးစလုံး, ဖြစ်နိုင် သုံးပါများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစုံတွဲအသုံးပြုမှုပုံစံအားဖြင့်ရှင်းပြ။ ဒါဟာလိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျနှင့်အခြားသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစာသားများ (Gagnon & Simon, 1973) ကထင်မြင်ပုံရသည်။ longitudinal နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသောအနာဂတ်သုတေသနသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများမည်သို့ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း ထပ်မံ၍ အလင်းဖြာနိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုသေချာပေါက်နှင့်အတူဤအသင်းအဖွဲ့များရဲ့ ဦး တည်ချက်မတည်နိုင်ပါ။